गढीमाई मेला र बलिप्रथाको विरोध | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
गढीमाई मेला र बलिप्रथाको विरोध
२०७१ मंसिर १२, शुक्रबार ०२:११ गते
– सन्तोषकुमार मिश्र
नेपालको बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट पूर्व नजिकै बरियारपुर गाविसमा अवस्थित गढीमाई प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ हुन् । प्रत्येक पा“च वर्षमा गढीमाईमा अभूतपूर्व मेला लाग्दछ । गढीमाईलाई लाखौँलाख पशुपक्षी बलि चढाइन्छ । गढीमाई मेलाको पशुबलि नेपाल, भारतमा मात्र नभएर विश्वमै प्रसिद्ध छ र चर्चित छ । मार्ग शुल्क पक्ष सप्तमी र अष्टमीमा मेलाको मुख्य दिन गढीमाईमा २५ हजारभन्दा बढी राँगा, २ लाखभन्दा बढी बोकाको बलि चढाइने र नेपाल, भारत र संसारकै गरी झन्डै पा“च लाख नरनारीले मेला भर्ने अनुमान छ ।
एक महिनाको गढीमाई मेला अवधिमा झन्डै आधा करोड मानिसले गढीमाई मेलामा पुगेर मनोकामना पूरा गर्ने भगवतीको दर्शन गर्नेछन् । तीन लाखभन्दा बढी कुखुरा, हा“स, भेँडा, बोका बलि चढाइन्छ । २५ हजारजति परेवा घरघरबाट ल्याएर गढीमाई स्थलमा उडाइन्छ । गढीमाई मेलाको गरिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गढिमाई मेलाको व्यापक प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । मेलालाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेका काम अहिले पनि युद्धस्तरमा भइरहेको छ । मेलास्थल एकदमै सुरक्षित रहेको सुरक्षा अंगले दाबी गरेको छ । स्थानीय प्रशासनद्वारा दर्शनार्थीहरुका लागि आवश्यक खाने, बस्ने, सुत्ने, घुम्ने, शौचालय, खानेपानी, पार्किङ र बजारको उचित प्रबन्ध भैसकेको छ । व्यापारीहरुका लागि गढीमाई मेला पैसा कमाउने राम्रो अवसर हो । गढीमाई मन्दिरको वरिपरि टाढाटाढासम्मको धान खेतमा पाल टाँगिएका छन् । गढीमाई मेलामा धर्म, मनोरञ्जन, नया“नया“ दृश्यको अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
सत्य र असल कुरा मन पराउने इमानदार भक्तहरुलाई गढीमाईले सदैव साथ दिनुहुन्छ । अन्याय, अत्याचार र असत्यविरूद्ध लड्ने भक्तजनहरुलाई गढीमाईले शक्ति दिनुहुन्छ । गढीमाईको महिमा कसैले घटाएर घटाउन सक्दैन । गढीमाईका सच्चा भक्तजनहरुलाई कसैले रोकेर रोक्न र कसैले भय, भ्रममा पार्न सक्दैनन् । गढीमाईको प्रताप र शक्तिले सहज एवं स्वस्फूर्त रुपमा पा“च वर्षीय मेलामा थामिनसक्नुको असंख्य व्यक्तिहरुको असामान्य र असाधारण भीड लाग्न जान्छ । गढीमाई सधैँ आफ्ना भक्तजनहरु खुशी र सुखी होऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ ।
गढीमाई मेलाको मुख्य दिनको विशेष पूजा र बलि चढाउने मुख्य क्षणमा मेलास्थलमा उपस्थित लाखौँलाख नरनारीको अचानक मौन ध्यान केन्द्रित हुन जान्छ । गढीमाईको स्थान रहेको ठाउ“मा आफैँ दीप प्रज्ज्वलित हुन्छ । त्यो क्षण अति चमत्कारिक र रोचक हुन्छ । त्यतिखेर आँकलन गर्न सकिन्छ, गढीमाईमा अभूतपूर्व शक्ति छ भन्ने कुरा । पूजारीले बलि सुरू भएको घोषणा गरेपछि अपार ढंगले काटमार र बलि चढाइन्छ । भक्तजनहरु अति प्रशन्न रहन्छन् । गढीमाईको भक्तिमा एकाग्र हुन्छन् । बलिका लागि तयार पारिएका पशुहरु पनि अदम्य साहसका साथ स्थिर र प्रशन्न रहन्छन् ।
अष्टांग हृदयमा भनिएको छ– सबै प्राणीले आफ्नो जीवनमा सुख प्राप्त गर्ने उपायमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहनुपर्दछ र त्यो सुख धर्मबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ । यसैले, सधैँ धार्मिक आचरणमा तत्परतापूर्वक लागिरहनुपर्दछ । मनुष्यले आफ्ना लागि धर्म, समाजका लागि धर्म र प्रकृतिका लागि धर्म गर्नुपर्दछ । समयअनुसार धर्ममा गुणात्मक परिवर्तन आउ“छ । धर्म सृष्टिको आधारस्वरुप त¤व भएकाले धर्मको कमीले पर्यावरणमा गुणात्मक कमीको कारण बन्दछ । अधर्म नै पर्यावरण प्रदूषणको मुख्य कारण हो । प्रकृतिका नियमहरुको पालना गर्नु, त्यसका नियमहरुमा अवरोध नपु¥याउनु र त्यसलाई सर्वोपयोगी बनाउने उपायमा लाग्नु प्रकृतिका लागि गरिने धर्म हो ।
बलिप्रथा प्रकृति र धर्मस“ग गा“सिएको छ । धर्म पालनामा ह्रास आएपछि पञ्चमहाभूतहरुको गुणमा पनि ह्रास आउ“छ, जसको परिणाम असन्तुलन र विकार उत्पन्न हुन्छ । बलिप्रथा पशुहरुको जीवनको मोक्ष र मुक्तिका लागि गरिन्छ । पशुबलि नगरिने हो, दिनहु“ पशु नकाटिने हो भने यो संसारलाई पशुले ढाक्नेछन् । त्यतिखेर मानिस कहा“ बस्नेछन् ? कसरी बा“च्नेछन् ? कल्पना गरौँ । जीवन र भोग प्रदान गर्ने सृष्टिको त¤व अथवा भाव नै देवीदेवता हुन् । पशुभोग, पशुबलि देवीदेवतालाई गरिन्छ र प्रसादका रुपमा बलि चढाइएको मासु मानिसहरुले भोजन गर्दछन् । सनातन हिन्दू धर्म अथवा मानवधर्मको अंशमा कमी आइरहेका कारण बिस्तारै–बिस्तारै यो संसारको विनाश हु“दै गइरहेको छ । मनुष्य र प्रकृति एकअर्काका परिपूरक हुन् । ठूलाठूला यज्ञमा मनुष्यले आफ्नो इच्छा र मनोकामनाअनुसारको भोग लगाउने छ । अश्वमेघ यज्ञजस्ता ठूला यज्ञ ऋषिमुनिका पालामा निरर्थक रुपमा भएका होइनन् ।
त¤वज्ञानी ऋषि–महर्षिहरुले बुझीकन नै यज्ञ गरेका हुन् । देवीदेवताहरुलाई खुशी पार्नकै लागि भोग अथवा बलि दिने चलन चलेको हो । यो चलन मासिनु भनेको मनुष्य आफैँ मासिनु हो । बलिप्रथामा व्यापकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता, सामाजिकता र यो न्यायोचित पनि छ । वर्तमान युग उपभोक्तावादी र अवसरवादी युग हो । कर्तव्य पालनाबाट प्रत्येक मनुष्य विचलित भएकै कारण समाजमा भ्रष्टाचार, अशान्ति, अभाव, दुःख, दरिद्रता उत्पन्न भएको हो । भगवान्लाई बलि चढाउ“दा सन्तुष्टिको अनुभूति गर्दछन् । यस तनावपूर्ण समयमा सन्तुष्टि पाउनु निकै कठिन छ । अहिंसा, शान्ति र समता निश्चित रुपमा वर्तमान युगमा मानिसहरुले खोजिरहेका छन् । बुद्ध धर्म, इसाई धर्म, हिन्दू धर्ममा हिंसाको विरोध गरिएको छ । बुद्ध धर्ममा पनि मानवले शान्ति पाउन ईश्वरलाई निर्दोष पशुबलि चढाएर वा ईश्वरस“ग याचना गरेर पाइन्छ भन्ने विश्वास राख्ने होइन भनिएको छ । हिन्दू धर्ममा पनि हिंसाको विरोध भएता पनि पशुबलि हिन्दू धर्मको एउटा अंग नै बनेको छ । प्रत्येक चाड, पर्व, मेलामा देवीदेवतालाई पशुबलि चढाइन्छ ।
बलिप्रथा सुरूदेखि नै विवेकपूर्ण विचारका रुपमा उदय भएको हो । पञ्चबलिमा राँगा, बोका, भेँडा, कुखुरा र हा“स चढाइन्छ । सुँगुरको पनि बलि चढाइन्छ । नेपालका सबै नेपाली बलिप्रथामा आबद्ध छन् । बलिप्रथाको विरोध गर्ने अनि मासु खाने कस्तो द्वैध चरित्र ? नेपालका सबै शक्तिपीठ देवीदेवतामा बलि चढाइन्छ । बलि नचढाइने मन्दिर र भगवान् पनि नेपालमै छन् । बलिप्रथा परम्परादेखि चल्दै आएकाले यो प्रचलित चलनलाई रोक्न सजिलैस“ग सकिँदैन । कुनै पनि प्रथा मान्ने वा नमान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको रोजाइ हो । नेपाललाई हिन्दूसापेक्ष राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेपछि बलिप्रथाविरोधीहरुले प्रोत्साहन, संरक्षण पाएका छन् ।
विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र रहेको नेपाल २०६३ सालपछि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भई अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएपछि दिन गुनी रात चौगुनीले हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बी क्रिश्चियन धर्ममा परिवर्तन भइरहेका छन् । २०६३ सालअघि नेपालमा क्रिश्चियनहरु औँलामा गन्न सकिन्थ्यो तर अहिले नेपालमा क्रिश्चियनहरुको संख्या ३५ लाख नाघेको अनुमान छ ।
पशुबलि परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सुप्रथा हो, कुप्रथा होइन । यो अन्धविश्वास पनि होइन । बलिप्रथाको विरोध, निन्दा, घृणा गर्नेहरु अधर्मी हुन् । गढीमाईमा हु“दै आएको बलिप्रथाको विरोध गर्नेहरु हिन्दूवादी पशुबलिका हिमायतीहरुका शत्रु हुन् । शत्रुहरुलाई बलिप्रथाको विरोध नगर्न कडा शब्दमा चेतावनी दिनुपर्दछ । हिन्दूहरुले कसैस“ग बदला, प्रतिशोध लिँदैनन् । किनभने, ऊ मानवतावादी र धार्मिक सहिष्णुतावादी हो । आफ्नो, धर्म, संस्कृति, परम्परा, प्रथा, रीतिरिवाजको संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने अधिकार सबैलाई छ । गढीमाई बलिप्रथाविरोधीहरुस“ग सदैव रिसाउनुहुन्छ । बलिप्रथाविरोधीहरु निष्कपटी छैनन् । हिन्दूवादीहरुका लागि बलिप्रथा स्वीकार्य छ । हिन्दूहरुलाई रिस उठाउने काम अन्य धर्मावलम्बीहरुले कदापि गर्नुहु“दैन । रिसबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ र द्वन्द्वबाट घिनलाग्दा कार्यहरु जन्मिन्छन् । बलिप्रथाविरोधीहरुले यतिखेर विचार र विवेक नै नपु¥याई गरेको व्यवहारले गढीमाईका भक्तजनहरुको मुटु घोचिरहेको छ । कसैको पनि अनावश्यक चित्त दुखाउने काम कसैले पनि गर्नुहु“दैन । गढीमाई मेलामा सरिक हुनेहरु जति सकारात्मक दृष्टिकोणका हुन्छन्, त्यति बलिप्रथाविरोधीहरुको दुष्प्रयासले राम्रो परिणाम अवश्य ल्याउनेछैन । बरू, धार्मिक द्वन्द्वको आगोमा घ्यू थप्न ठूलो मद्दत गर्नेछ । गढीमाईले आफ्ना भक्तजनहरुलाई सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ– ‘नडराऊ, किनकि म तिमीहरुसित हर बखत छु ।’
अघिल्लो मेलादेखि एक्कासि गढीमाई मेलामा बलिप्रथाको विरोध र विवादको समस्या थपिएको हो । यो विरोध पूर्ण प्रायोजित हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । बलिप्रथालाई रोक लगाउन, युरोपेली महासंघ र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुले ठूलो धन, श्रम र समय खर्च गरिरहेका छन् । समय र अवसरले बलिप्रथाविरोधीहरुलाई साथ
दिनेछैन । युरोपेली युनियनले गढीमाई मेलामा बलि रोक्न गरेको आग्रह नै पूर्वाग्रह हो भन्दै पत्रकार बिम्मी शर्मा आफ्नो फेसबुक पेजमा यसरी आक्रोश पोख्दै लेख्नुहुन्छ– ‘आफ्नो देशमा नरसंहारका लागि हतियार उत्पादन गरेर संसारभर निर्दोष मानिसहरुको बलि दिने बेलामा लाज नलाग्ने, अहिले नेपालजस्तो सानो देशमा चल्दै आएको बलिप्रथा रोक्नलाई यति ठूलो वितन्डा मच्चाउने ?’ काग कराउ“दै छ, पिना सुक्दैछ भनेझैँ युरोपेली महासंघले अनुचित दबाब दिँदैमा गढीमाईमा बलि चढाउन रोकिँदैन ।
संयोगवश गढीमाई मेलाको मुख्य दिन र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अठारौँ सम्मेलनको तिथि एकैदिन प¥यो । सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख, चीनको पर्यवेक्षकसमेत रहेको सार्क शिखर सम्मेलनका अवसरमा युरोपेली महासंघले गढीमाई मेलामा बलिप्रथा रोक्न जुन आग्रह ग¥यो, यसले गर्दा पनि गढीमाई मेलाले थप चर्चा र महत्त्व पाएको देखियो ।
विश्वका धार्मिक पर्यटकहरुका लागि पा“च वर्षे गढीमाई मेला एउटा मह¤वपूर्ण अवसर बन्दैछ र बन्न सक्दछ ।